बालबालिका लाई अनिद्राको समस्या किन ? — Imandarmedia.com
१सिमानामा विवाद बढेलगत्तै मोदीले चीनबिरुद्ध चाले यस्तो कडा कदम, अब के गर्लान राष्ट्रपति सी ?
२आफ्ना राजनीतिक गुरुको अचानक निधन भएपछि स्तब्ध बने प्रचण्ड, यस्तो छ कारण
३प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध फेरि दर्ता भयो अर्को मुद्दा, निवेदन पत्रसहित
४ओलीले गरेको भ्रष्टाचारको विषय उठाउँदा संसद विघटन- नेता नेपाल
५संसदलाई रङ्गीबिरङ्गी झाँकी देखाउने थलो बनाउनु हुन्न : ओली
६निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि दाहाल-नेपाल समूहको प्रतिक्रिया- पत्र पाएपछि थप निर्णय लिन्छौँ
७निर्वाचन आयोगको निर्णयमा सन्तुष्ट छैनौँ, आन्तरिक छलफलपछि आधिकारिक धारणा आउँछ- नेता पुन
८ओली, नेम्वाङ र खरेलसँग अर्कै संविधान छ- वरिष्ठ अधिवक्ता थापा
९संसद बिघटनबिरुद्धको मुद्दमा सुनुवाई सकियो, के आयो सर्वोच्चको आदेश ?
१०राष्ट्रपतिलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि, के छ स्वास्थ्य अवस्था ?
११बैसाखमा घोषणा गरिएको मध्यावधिक चुनावबारे गृहमन्त्री थापाले गरे यस्ताे खुलासा
१२गीता भित्र छ, जीवन जिउने र बुझ्ने सही सार, पढ्नुहोस् यी अंश
बालबालिका लाई अनिद्राको समस्या किन ?
काठमाडाैँ । कहिले काहीँ त बालबच्चा थाकेर पनि दिनमा सुत्न सक्छन् । यद्यपि सामान्य अवस्थामा पनि उनीहरु दिनमा सुत्छन् भने उनीहरुमा अनिद्राको समस्या छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । दिनमा पटक पटक सुत्नु पनि ठिक होइन ।
ठूला मान्छेमा जस्तै बालबच्चाले पनि डरलाग्दो सपना देख्ने गर्छन् । बेलाबखत उनीहरु खराब सपना देखेर निद्रामै तर्सिएर उठ्ने गर्छन् । त्यसपछि उनीहरुलाई सुत्न अरु असहज हुन्छ । दिनमा पनि सपना सम्झिएर उनीहरु डराउने गर्छन् । पटक पटक डरलाग्दो सपना देख्नु पनि निद्रा सम्बन्धी विकार हो । यसले बच्चाको निद्रा विथोलिन्छ, मानसिक तनाव बढ्छ र स्वास्थ्यमा पनि समस्या ल्याउँछ ।
कतिपय बच्चाहरु राती सुत्नै सक्दैनन् । अर्थात उनीहरु सुत्ने समयमा पनि सुत्न सक्दैनन् । ओछ्यानमा पल्टिएपछि पनि धेरै समय छटपटाइरहँछन् । यसरी सुत्ने समयमा निद्रा नलाग्नुलाई इनसोमनियाको समस्या भएको भनिन्छ । कुनै तनावको कारण यस्तो समस्या देखापर्छ । यदि तपाईंको बच्चा राती लामो समयसम्म सुत्दैन भने उनमा चिन्ता वा तनावको समस्या छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
घुर्नु त्यती हानिकारक त होइन । यद्यपि फोक्सोमा कुनै रोकावट छ भने घुर्ने गर्छन् । यसले निद्रा सम्बन्धी विकार पैदा गर्छ । नाकमा कफ जम्दा, श्वास संक्रमणमा, टन्सिल बढ्दा पनि यस्तो समस्या देखापर्छ । बेलाबखत केही गंभिर समस्या अब्स्ट्रक्टिव स्लि एपनियाको कारण पनि घुर्ने समस्या हुन्छ । लगभग तीन प्रतिशत बच्चा यस रोगले ग्रस्त छन् ।
डरलाग्दो सपना देख्नु र राती डराउनु दुई फरक कुरा हुन् । बेलाबखत बच्चाहरु रातमा अचानक ब्युँझने गर्छन् र चिच्याउँछन् । वा रुन थाल्छन् । यसमा सास फुल्ने, पसिना आउने, मांशपेसी च्यापिने समस्याले पनि हुनसक्छ । अहिले पाँच जनामा एक बच्चा नाइट टेररले ग्रस्त छन् ।
पाँच बर्षभन्दा कम उमेरका बच्चाले ओछ्यनमा पिसाब गर्नु खासै ठूलो समस्या होइन । यद्यपि त्यसभन्दा बढी उमेरका बच्चा छन् र प्रायजसो ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने गर्छन् भने उनीहरुमा निद्रा सम्बन्धित समस्या छ भने बुझ्नुपर्छ ।
यदि तपाईंको बच्चा आधी रातमा उठेर निद्रामै उताउता हिँड्छन् भने यो पनि एक विकार नै हो । कहिले काहीँ यस्तो समस्या देखिए त सामान्य मान्न सकिएला यद्यपि बारम्बार उनीहरु निद्रामा हिँड्ने गर्छन् भने चिकित्सकको परामर्श आवश्यक छ ।
गीता भित्र छ, जीवन जिउने र बुझ्ने सही सार, पढ्नुहोस् यी अंश
बाच्चाहरू काे भावना यसरी बुझाैँ
खतरनाक हुनसक्छ मानसिक तनाव, अनावश्यक कुरा यसरी गर्नुस् कम
जाडो महिनामा पिउनुपर्छ पानी, नत्र हुनसक्छ शरिरलाई यस्ताे समस्या
के तपाई हामी स्वस्थ छाैँ-छैनाैँ, अब जानी राखाैँ यी चार कुरा
प्रकृतिसँग हातेमालोः खुसी र स्वास्थ्य जीवनको लागि
दिनमा कतिवटा अण्डा खाँदा स्वास्थ्यमा पुग्दैन हानी ?
ट्याटु मोडलसँग डेटिङ जान चाहनेकोे ओइरो
यी ६ व्यक्तिले खानुहुँदैन सुन्तला, बड्न सक्छ धेरै समस्या
तातोपानीले नुहाउने बानी छ, ख्याल गर्नुहोस कपाल झर्ने र छालामा समस्या आउन सक्छ